डिजिटल युगमा युवा नेतृत्वका चुनौतीहरु | OB Media
Nawaraj Kattle | १३ असार २०७८, आईतवार ११:५९
जब राजनीतिक प्रणालीमा संकट आँउछ प्रायजसो नेतृत्वका बारेमा बहस हुने गर्दछ । यो कुरा सफलताको बेला पनि उत्तिकै उठ्ने गर्दछ । नेतृत्वले सफलताको श्रेय र असफताको अपजस दुवै बोक्ने गर्दछ । मानव जाती निरन्तर अग्रगतिमा यात्रारत विशेष प्राणी हो । स्वभावैले यो यथास्थितिमा रहन सक्दैन । अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वका बारेमा बहश हुने गरेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा हुने छफलफहरुमा युवा नेतृत्वका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने गरेको छ । असक्षम भए, हुतिहारा भए, नयाँ गर्न सकेनन्, पिछलग्गु भए आदि । यो आम राजनीतिमा जस्तै कम्युुनिष्ट राजनीतिमा पनि उत्तिकै चलिरहेको छ । यहाँ युवा नेतृत्वका सवालहरु बारे केही चर्चा गर्नु आवश्यक हुन गएको छ । हामी सक्छौं भन्ने विचार विकास गर्न ।
हामी कम्युुनिष्ट घोषणापत्रका हरफ हरफ पढेर आफूलाई कम्युनिष्ट ठान्नेहरुले माक्र्स र एंगेल्स पढ्ने नै भयो । मानव जातिले आर्जन गरेको सर्वोच्च ज्ञानले लैस गर्न उद्दत कार्ल माक्र्स र उनका उस्तै उचाईका वैज्ञानिक अनुसन्धान कर्ता साथि फ्रेडरिक एंगेल्सले क्रमशः तीस र अठ्ठाइस वर्षमा लेखेको कालजयी कृति कम्युनिष्ट घोषणपत्रलेसंसार हल्लाएको संझेर आफू बुढो भएको र केही गर्न नसकेको ठान्नु स्वाभाविक हो । जतिबेला मेन्सेविकका विरुद्धको संघर्षमा सफलता प्राप्त गरेर बोल्शेविकको जग हाल्दै थिए, लेनिन जम्मा तेत्तिस वर्षका मात्रै थिए । भूगोलमा संसारको सबैभन्दा ठूलो र जनसंख्यामा तेश्रो ठूलो देशमा क्रान्तिको झण्डा उनैले उचाले । पहिलो समाजवादी देश निर्माण गरे । संसारको सबैभन्दा विशाल जनसंख्या भएको देश चीनको सफल क्रान्तिको अगुवाई गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्दा माओ मात्र बयालिस वर्षको थिए ।
मात्रै उनन्चालिस वर्षको छोटो आयु बाँचेर शहीद भएका चे ग्वेभाराको जीवनीले प्रभावित नगरेको सायदै कोही कम्युनिष्ट होला संसारमा । छत्तिस वर्षको उमेरमा संयुक्त राष्ट संघको सभालाई सम्बोधन गर्दै विभेदकारी लुटेरा पूँजीवादको बदला सच्चा समाजवादको पक्षमा वैचारिक झण्डा उचालेर संसारलाई अपिल गरेका थिए । चेले जहिले पनि हामीलाई अदम्य क्रान्तिकारी सहास र उच्च आशावादले ओतप्रोत जीवन बाँच्न प्रेरित गरिरहे । जसरी भारतमा गान्धीलाई सरलताको सगरमाथा भनेर चिनिन्छ उसैगरी भियतनाममा हो चि मिन्हलाई । अमेरिकाले हारेको महान् युद्धका नायक हुन् उनी । जनताबाट जे अभूतपूर्व विश्वास आर्जन गरे उनले सबै आफ्नो युवाकालमै गरेका थिए । छत्तिस वर्षको उमेरमै प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरियाको स्थापना गरिसकेका किम इल सुगंकाबारेमा त हामीहरु जानकार नै छौँ । उनका नाती अठ्तिस वषर््िाय किम जोन उनले त विश्व पूँजीवादको लागि एटम बम जत्तिकै काम गरिरहेका छन् । भलै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बंश परम्परा कति सही होला । भर्खरै दक्षिण कोरियाको विपक्षि दलको प्रमुख नेतृत्वमा छत्तिस वर्षिय युवा निर्वाचित भएको समाचार शेयर गर्नेको कमि नेपालमा पनि छैन । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका एकजना चौबिस वर्षिय नायक भगतसिंहले जीवनकालमा जति चर्चा बटुले उनको शहादत्त पछि त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी । भगतसिंहको फिल्म नहेर्ने को होला ?
हामीसँग यस्तो सूचि लामो छ । उनन्तिस वर्षको उमेरमा संसारको सुखको खोजीमा घर छोडेर हिँडेका बुद्ध होउन् वा तेत्तिस वर्षमा आधा विश्व जितिसकेको सिकन्दर महान् । बत्तिस वर्षका चर्चित इतिहासकार रटर ब्रेगम्यान होउन् वा सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने युसुफजाई मलाला वा फेसबुकको साहु मार्क जुकरवर्ग । अष्टेयाका चौतिस वर्षिय चान्सलर, फिनल्याण्डकी पैतिस वर्षिया प्रधानमन्त्री, कतारका अमीर, मंगोलियाका प्रधानमन्त्री, न्यूजील्याण्डको प्रधानमन्त्री, एल साल्भाडोरको राष्टपति, जर्जियाको प्रधानमन्त्री सबै युवाहरु नै छन् । फ्रान्समा पनि उनन्चालिस वर्षिय राष्टपति निर्वाचित भएका थिए ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ उमेर र नेतृत्वका विचमा समानुपातिक वा व्युतक्रमाणुपातिक कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? उमेर बढ्दै गयो भने नेतृत्वको प्रभावकारीता बढ्दै जान्छ वा घट्दै ? अनुभवले समृद्ध भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ वा उही र उस्तै काम बारम्बार गरिरहदा थकान, बोझ र दिक्दारी पैदा हुन्छ ? मेरो विष्लेषण छ कि उमेर र कामको प्रभावकारीताको विचमा समानुपातिक सम्बन्ध छैन । धेरै उमेर बढ्दै जाँदा कामको प्रभावकारीता घट्दै जान्छ । जीव वैज्ञानिक आँखाबाट हेरौँ वा समाज वैज्ञानिक । यसका बारेमा पनि हामी गहन छलफल गर्न सक्छौँ । यदी हामी राम्रोको खोजीमा छौँ भने पूर्वाग्रही किन हुने । तर हामीसँग जबरजस्त दुईवटा समस्याहरु नेतृत्वका बारेमा छलफल हुँदा उठ्ने गरेको छ । युवा नेतृत्वले भन्छ कि अब बुढाहरुको काम छैन । पाको नेतृत्वले भन्छ कि यी त बच्चै छन् ।सारतः दुवै पक्षले एक अर्कालाई काम नभएको भन्छन् । हुनु पर्ने हो कि नेतृत्वको योजनाबद्ध विकास । पुरानोको अनुभव र नयाँको सृजनशिलता दुवैलाई जोड्ने । रणनैतिक सवालमा पुरानोको भूमिका बढाउने र कार्यकारी भूमिकाहरुमा नयाँ टिमको अभ्यास गर्ने । एकले अर्कालाई निषेध होइन कि पुरकको भूमिका निर्वाह गर्ने । के हामी नेतृत्व प्रणालीमा नयाँ खाले अभ्यास गर्न सक्छौँ ? सक्नु पर्छ ।
युवा नेतृत्वले आजको दुनियाँमा नेतृत्व विकासको लागि के के गर्नु पर्ला ? पहिलो काम हो विचारको विकास । दृष्टिकोणको निर्माण । नेतृत्वले मूलतः नीतिको अगुवाई गर्ने हो । कस्तो नीति सही नीति हो भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि । नेतृत्वले समयको पदचाप बुझ्नु पर्दछ ,र अगाडी अगाडी हिड्नु पर्दछ । जनता सँगसँगै तर अगाडी । जस्तो अहिले हामी डिजिटल युगमा छौँ । प्रविधिले मान्छेलाई विस्थापित गरिरहेको छ । कामको अन्त्य भइरहेको छ । रोबोटले विरामीको सल्यक्रिया गर्दछ, घरको नक्शा बनाउछ, बारीमा खेतिपाती गर्दछ, विद्यार्थीहरुलाई पढाउछ, कारखानामा जुत्ता उत्पादन गर्छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, किसान, शिक्षक र मजदुरलाई विस्थापित गरिरहेको छ ।यसप्रति पीठ फर्काएर र ओठ लेब्य्राएर हिड्ने मान्छे मैले देखेको र भेटेको छु । अँ यस्तो त हुँदै गर्छ भन्ने । हुलाक कहाँ गयो आजकाल ? के कसैले आराम छु आराम चहान्छु भनेर चिट्ठी लेखिरहेको छ ?इमेलले हुलाकलाई सर्लक्कै निलिसक्यो । इमेल उम्दा अवस्थामा छ भने हुलाक मृत्युको दिन गनेर बसिरहेको छ । ट्याक्टरले गोरु, राँगा र घोडाले जोत्ने खेतको हलो, फाली र जुवा उप्काउदै लगिरहेको छ । तेलमिलले कोल र कुटानी मिलले पानी घट्ट निल्दै गइरहेको छ । कुनै दिन आउनेवाला छ , काँसको बञ्चरो, हाते चर्खा, हुलाक, हलो, कोल र घट्ट एकै ठाँउमा भेटिने वाला छन् अर्थात् संग्राहलयमा । अरु के के थन्कने छन् संग्राहलयमा हामीले सूचि बनाएका छौं ? अहिले सम्म वस्तु मात्रै थन्किएका थिए, अब मान्छेको पेशा पनि थन्कियो भने ? यही हो कामको अन्त्य भनेको ।के परिणाम आउला ?अकल्पनिय ।जिवाश्मा इन्धनको युग समाप्त हुँदैछ र नविकरणीय उर्जाको युग शुरु हुँदैछ । उर्जामा हुने क्रान्तिका बारेमा हाम्रोमा खासै बहश भएकै छैन । निःशुल्क उर्जाको परिणाम के होला ?
सात अर्ब नब्बे करोड मान्छेलाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने काम गरेको छ इन्टरनेटले । सञ्चार आज लगभग निःशुल्क भएको छ संसारभर । मानव जातीले यस्तो प्रयोग पहिलो पटक गर्दैछ । दुई अर्ब विद्यार्थीहरुको एउटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।भर्चुअल माध्यमले । अरबाँै किताबहरुको पसल त नेटमा थापिएकै छ । गुगल जस्तो खोजी माध्यमले जे खोज्यो त्यो क्षणभरमै फेला पारेर चाहिएको नतिजा हामीलाई दिन थालेको धेरै भइसक्यो । यु ट्युब च्यानलले हामीलाई भिडियोहरु सजिलै र निशुल्क उपलब्ध गराइरहेकै छ ।सञ्चारको पाँचौँ पुस्ता जसलाई फाइभ जी भनेर चिनिन्छ, भूउपग्रह मार्फत् निःशुल्क र तीव्र गतिमा पृथ्वीका सबै मान्छेले प्रयोग गर्दा हुने परिणामको आँकलन हामीले गरेका छैनौँ ।यही दशकमा संसारको प्रत्येक घरमा कम्तिमा एक दर्जन सेन्सरहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने छन् । सि जिन पिंले चीनीयाँ भाषामाबोल्दा जो बाइडेनले अंग्रजीमा त अहिले पनि सुनिरहेकै छन् । न दोभाषे चाहिन्छ न उल्था गर्ने मान्छे । गुगलमा किताबहरु उल्था सजिलै हुने गरेको छ । चश्मा वा क्यामेराले अनुहारको अध्ययन गरेर कुन देशको नागरिक हो पत्ता लगाउन कठिन भएन । सामाजिक सञ्जाल हाम्रो ठूलो सञ्चारको माध्यम भएको छ । हिमाल, पहाड, समुन्द्रले हाम्रो यात्रा रोक्न सकेको छैन । एक घण्टामा पृथ्वीको फन्को मार्ने अवस्था हँुदैछ कुनै दिन त्यो पनि सजिलै टिकट काटेर । यानमा ।हेलिकप्टरलाई विस्थापित गर्ने उड्ने गाडीहरु जो निर्माणाधिन अवस्थाम छन् । हिजो मोबाइल फोन संभ्रान्त वर्गको पेवा जस्तो थियो आज आम मान्छेको हातहातमा छ, निकट भोली उड्ने गाडी हामी प्रत्येकको दैलोमा खडा हुनेछ । आजको मोबाइलफोन प्रत्येकको खल्तिमा भए जस्तै गरी ।
थ्रि डि प्रिन्टीगं घर निर्माण देखि मानव शरिरका मष्तिष्क बाहेकका अंगहरु निर्माण गरिरहेको छ । खेतबिनै खाद्यान्न पनि उत्पादनको तयारी गर्दैछ । यसले गर्ने कामको सूचि पनि असिमित छ । मानव बौद्धिकता सँग कृत्रिम बौद्धिकताले जोरी खोजिरहेकै छ । यसको परिणाम पनि अकल्पिनिय नै हुनेछ । जेनेटिक इञ्जिनियरिगं चार अर्ब वर्ष देखि चल्दै आएको प्राकृतिक छनौटको तरिकाबाट भइरहेको जीवहरुको विकासमाथि प्रश्न खडा गर्दै आमा बाबुबाट बनेको बच्चा होइन हामीले चाहे जस्तो बच्चा बनाउन सकिने हुँदैछ । भ्रूण हत्या नगरिकनै छोरा वा छोरी जन्माउन थालेको त धेरै भइसक्यो । शुक्रकिट र डिम्बकोश राख्ने बैंकले त्यो काम सजिलै गरिरहेको छ । बाबुको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना पनि आमाले चाहेको बेला बाबुकै डिएनएको बच्चा पाउन कुनै कठिन भएन ।
वस्तुहरु र मान्छेहरु इन्टरनेटमा जोडिन थालेका मात्रै होइनन् डिजिटल वस्तुहरु पनि बनेकै छन् , जस्तो डिजिटल मुद्रा । डिजिटल उपचार पद्धति, डिजिटल पढाई, डिजिटल व्यापार सबका सब । युवा नेतृत्व आजको दुनियाँका बारेमा कम्तिमा सैद्धान्तिक रुपमै भएपनि जानकार हुनैपर्दछ । ज्ञानमा आएको तीव्र बदलावले दश वर्ष पढेर जिन्दगीभर धान्ने जमाना समाप्त भयो । अब ज्ञानलाई क्षण क्षणमा नविकरण नगर्ने हो भने विस्थापित हुने संभावना प्रबल हुन्छ । नेतृत्वका लागि इच्छा राख्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविक नेतृत्व गर्नु अर्को कुरा हो ।
संक्षेपमा, डिजिटल युगको नेतृत्व डिजिटल युगको चेतनाले मात्रै हुन सक्दछ । त्यस्तो नेतृत्व एकल चेतनाले संभव छैन । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली वस्तुगत आवश्कता बनेको छ र संभव पनि । जंगली युगमा शिकारीको सानो समूहको अगुवाई गरे पुग्थ्यो । कृषि कार्य विकेन्द्रीत भएकोले नेतृत्व विकेन्द्रीत थियो । औद्योगिक युगमा सयौँ वा हजारौँ मजदुरहरुलाई एकैसाथ नेतृत्व गर्न केन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक थियो । डिजिटल युगमा करोडौँ र अरबौँको संख्यामा तर सामूहिक नेतृत्व प्रणाली आवश्यक र संभव भएको छ । दोश्रो कुरा युवा नेतृत्वले नयाँ प्रयोगबाट डराउनु हुँदैन । तेश्रो कुरा, मानव जातिले थुप्रै असंभवलाई संभवमा बदलेको छ । नेतृत्व गर्न संभव छ । छलफल गराँै । अगाडीको बाटो तय गरौँ । भविष्य हाम्रो हातमा छ ।
(लेखक केन्द्रीय सदस्य, नेकपा(माओवादी केन्द्र), अध्यक्ष, समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठान हुनुहुन्छ)
कोशीमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी विराटनगरका दुईसहित तीनजनाको मृत्यु, २ जना घाईते